Admin Executive | Easy Ray ﻿
•	Responsible for checking all assets of company.
•	Controlling for admin general expenses.
•	Organize meetings,special events and trainings
•	အသက်( ၂၅ )နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်။
•	Adminနှင့်ပတ်သက်သည့် Certificate/ Diploma ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
•	Computer ( Word/Excel/PowerPoint/Photoshop)ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။
•	သွက်လတ်တက်ကြွ၍admin လုပ်ငန်းဆောင်တာများအား စိတ်ဝင်တစားလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	မန္တလေးမြို့အတွင်းကျွမ်းကျင်စွာသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ (ဆိုင်ကယ်ရှိရမည်)
•	Adminလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး(၃) နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
142 Days, Full time , Food & Beverages / Catering
Admin Executive Admin, Secretarial & PA jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Easy Ray Admin, Secretarial & PA jobs Admin, Secretarial & PA jobs Admin Executive Jobs in Myanmar, jobs in Yangon